रनवीर दिपीकाको बिहे ?…..कहिले ? « Mazzako Online
रनवीर दिपीकाको बिहे ?…..कहिले ?
बलिउड स्टारहरु रनवीर सिंह र दिपीका पादुकोण अन्ततोगत्वा विवाहको निर्णयमा पुगेका छन् । एक अर्काको प्रेममा चुलुम्म डुबेको यो जोडीले २०१८ कै अन्त्यतिर विवाह गर्ने बताईएको छ । विवाहको लागि योजना समेत बन्न शुरु भएको भारतीय मिडियाहरुले लेखेका छन् ।
रनवीर र दिपीकाका अभिभावकहरुले भेट गरेका छन् । विभिन्न उपहारहरुको साटासाट गर्दै गरिएको भेटघाटमा रनवीर र दिपीकाको विवाह कसरी गर्ने ? कहाँ गर्ने ? पार्टी कस्तो किसिमको दिने ? भन्ने बिषयमा छलफल भएको थियो । दिपीकाका अभिभावक प्रकाश र उजाला पादुकोण र रणवीरका मातापिता जगजित सिंह र अन्जु भवनानीबीच गहना र उपहार आदानप्रदान भएको छ ।
यो भेटमा रणवीर दिपीकाको विवाहको लागि सेप्टेम्बर र डिसेम्बरका सम्भावित चार डेटहरुलाई पिक गरिएको छ । विवाहको लागि गहनाहरु र साडीहरु छनौट गर्न समेत थालिएको छ । रणवीर दिपीकाको हिन्दु परम्परा अनुसार विवाह हुनेछ ।
हुन त दिपीका र रणवीरले आफ्ना परिवारहरुसँगै न्यु ईयर माल्दिभ्समा मनाँउदादेखि नै परिवारबीचमा पनि सम्बन्ध प्रगाड भएको थियो । अब हेर्न बाँकी छ बलिउडको निकै चर्चित यो लभ जोडीको बिवाह कहाँ हुनेछ अनि कस्तो हुनेछ ?